Xuskii 3aad Ee Fidinta Adeega Caafimaadka. - Cakaara News
Xuskii 3aad Ee Fidinta Adeega Caafimaadka.
Jigjigga(CN) talaado, 29 December 2015, Munaasabada xuska 3aad ee barnaamijka fidinta adeega caafimaadka reer guuraaga oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI oo kaashanaya wasaarada caafimaadka ee heer faderaal ayaa si heer sare ah loogu xusay xarunta DDSI ee jigjiga taasi oo ka dhacay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Munaasabadan lagu xusayay maalinta fidinta adeega caafimaad ee 3 jirsaday oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta iyo shaqaalaha xafiiska caafimaadka DDSI oo uu ka mid yahay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI, shaqaalaha fidinta adeega caafimaadka ee degmooyinka xarumaha caafimaadka iyo masuuliyiin ka socoday hay’adaha aan dawliga ahayn ee ay bahwadaagta yihiin xafiiska.
Munaasabadan oo halku dhig looga dhigay:- barnaamijka fidinta adeega caafimaadku waa lafdhabarta horumarinta caafimaadka bulshada ayaa waxa ugu horayntii ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed oo ka warbixiyay ahmiyada uu leeyahay barnaamijkan fidinta adeega caafimaadku wuxuuna sheegay in ay bulshadeenu u badan yihiin kuwo ku dhaqan miyiga sidaasi darteena xukuumada DDSI iyo ta dalkuba dajisay siyaasado ku wajahan ka hortaga cudurada iyo dar dargalinta adeegyada caafimaadka taasi oo xooga saaraysa sidii kor loogu qaadilaha wacyigalinta iyo fahanka bulshada la gaadhsiin lahaa adeegyada caafimaadka ee aas aasiga ah bulshada ku dhaqan miyiga.
Wuxuuna sheegay wasiirku in tan iyo mudadii uu hirgalay barnaamijkan fidinta adeega caafimaadku uu guulo la taaban karo soo hooyay, gaar ahaan dhinacyada balaadhinta adeegyada aas aasiga ah islamarkaana kor u qaaday adeegyada lagu dhimayo dhimashada hooyada iyo dhalaanka, wuxuuna tilmaamay wasiirku in xafiiska caafimaadka DDSI xooga saaray hirgalinta abaabulka bulshada iyo awood siinta aqoon korodhsiga shaqaalaha fidinta adeega caafimaadka.
Munaasabadan oo ay kooxda fanka iyo suugaanta DDSI ku soo bandhigayeen heeso iyo dhaantooyin wacyigalin ah, ayaa waxaa gabagabii munaasabada uu wasiirka caafimaadka DDSI abaalmarino gudoonsiiyay shaqsiyaadkii hormuudka ahaa ee muuyiyay dadaalo dheeriya ee dhinaca fidinta adeega caafimaadka iyo hay’adaha aan dawliga ahayn ee ka qayb- qaatay hirgalinta barnaamijkan.